Baker-Olimpico silikoon / dhimatay Pan dalaka - Shiinaha Baker-Olimpico silikoon / dhimatay Pan dalaka qeybiye,-SHQD Factory
Home » Products » Mat dhimatay
size: 15 7/10’’ x 11 4/5'’ (40 x 30cm)
miisaanka: 4.58 oz / 130g
Waa maxay sababta Dooro The gargaaraha Jiko Baker Olimpico PTFE dhimatay Gas
Nadiifi-up waa neecaw!
•Si fudud u nadiifi dermaha biyo diiran oo saabuun leh
•Baker-Olimpico dalaka digsiga ay qaataan wax PTFE iyo silicone, Non-ul, kuwaas oo ah mid aad u fudud si aad u nadiifiso iyo weelka ammaan.
•Si fudud u meel derin this dabkaan cuntada , Marna ulo!
•Fiican ee sol kasta oo ay ka mid yihiin sida Char-dub, Weber, galaas, Dhuxusha iyo xataa gagoado infrared.
•Non-ul Baker-Olimpico dalaka digsiga adeega karaa sida derin solay lagu dubo, safay foornada dhagaynin ,derin dubista, karinta derin iwm.
•solay khudaar,hilib, khudaar, kalluunka, haley, pizza, xataa canjeelada, hilib doofaar iyo ukunta!! Wax kasta oo kale oo aad doonayso in ay ku riday dabkaan!
•The dalaka digsiga Baker-Olimpico sidoo kale waa kaamil for dubista! waa laga gooyn karaa in ay ku haboon aad foornada rootiga, digsiyada iyo daasado cookie lagu karsado, galidda, dubista iyo dhagin.
Baker-Olimpico dalaka digsiga leeyahay dabacsanaan kaamil ah
•isticmaali karo, horseednimo Baker-Olimpico dalaka digsiga waa ilaa 1,000 isticmaalka jeer soo noqnoqda.
•caabin heerkulka aad u fiican , -70℉ in 570 ℉.
Baker-Olimpico silikoon Dabbing Mat
Baker-Olimpico PTFE dhimatay Gas Jiko gargaaraha